एनआरएनए मत परिणाम: पन्त-४७५, आचार्य-४०५
काठमाडौं, १ कात्तिक : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा ८ सय ८० मतगणना हुुुदा अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तले ७० मतले अग्रता लिएका छन् । अहिलेसम्मकाे गणनाअनुसार अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले… बाँकी »
एनआरएनए निर्वाचन अपडेट: अमेरीका, अस्ट्रेलीया र अफ्रिकाको मतगणना सकियो
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अमेरीका, अस्ट्रेलीया र अफ्रिकाको मतगणना सक्किएको छ । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार तिनै क्षेत्रको मतगणना सक्किदा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले अग्रता लिएका… बाँकी »
एनआरएनए निर्वाचन अपडेट: जम्मा २ हजार ३४४ मत खस्यो !
काठमाडौं / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा जम्मा २ हजार ३४४ मत खसेको छ । बिहीबार बिहान १० बजेबाट हायत होटलमा मतदान प्रक्रिया… बाँकी »
विप्लवका दाई वीरजंग चन्दसहित २१ जना पक्राउ
काठमाडौं । विप्लव समूहका मध्येपश्चिम कमाण्ड अर्थात् विप्लवका दाई वीरजंग चन्दसहित २१ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । उनीहरुसँग विस्फोट सामग्री र हतियार पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राजपुर… बाँकी »
एनआरएनएको मतदान सुरु हुँदानहुँदै स्थगित, चलखेल भएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले गरे नाराबाजी र तोडफोड
शिखरपोष्ट रिपोर्टर काठमाडौं, २९ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन कार्यक्रमअनुरुप मतदान हुँदानहुँदै स्थगित भएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बुधबार निर्धारित समय भन्दा ३ घण्टा ढिलो… बाँकी »
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधिसभाका सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । दोलखाका सांसद तथा नेकपाका केन्द्रीय गुरुङलाई ज्यान लिने मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।… बाँकी »
काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्ष मिलन पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार सम्पन्न दलको निर्वाचनमा पाण्डे ५८ प्रतिशत मत पाएर विजयी भएका हुन् । करिव ५ प्रतिशत मत नो… बाँकी »
एनआरएनए निर्वाचन तालिका परिवर्तन, राती १० बजेसम्म मतदान
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ । संघको निर्वाचन समितिले संशोधनसहित जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार आज विहान ८ बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु… बाँकी »
माप्य दुधकोशी गाउँपालिकास्थित ‘कायघाट मोटरेबल पुल’को टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइदैं
सुमन खालिङ/शिखरपोष्ट file picture सोलुखुम्बु, २८ असोज । सोलुखुम्बुस्थित माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको अति दुर्गम क्षेत्र मानिएको कोशीपारी तर्ने कायघाट मोटरेबल पुल निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।… बाँकी »
को हुन् मन केसी ? नमस्कार, म मन केसी । विगत २३ वर्षदेखि अस्ट्रेलिया बस्दै आएको छु । गुल्मी जिल्लामा जन्मे हुर्केको हुँ । एनआरएन अभियानमा १७⁄१८ वर्षदेखि निरन्तर लागिपरेको छु… बाँकी »
9 / 421« Previous4567891011121314Next »